प्रचण्डले माओवादी केन्द्र विघटन गर्न खाेजेकै हुन्? – Karnalisandesh
प्रकाशित मितिः ३० भाद्र २०७८, बुधबार २१:३७ September 15, 2021
काठमाडौँ। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) ले बाेल्ने अभिव्यक्तिहरु प्राय: चर्चामा रहने गर्दछन्। तर, पछिल्लो समय उनले दिदै आएका अभिव्यक्तिले भने माओवादी आन्दोलन र पार्टीको भविष्यमाथि नै गम्भीर संकट र्सिजना गर्ने खालका देखिन्छन्। उनका अभिव्यक्तिमाथि विभिन्न टिकाटिप्पणी सुनिन थालेका छन्।
अध्यक्ष प्रचण्डले सार्वजनिक मञ्चहरुबाट आफ्ना कमजोरीहरु स्मरण गर्ने र आलोचित हुने क्रम एकाध वर्षदेखि सुरु गरेको पाइन्छ। तर, पार्टीका विरुद्धमा बोल्न थालेको भने धेरै भएको छैन। यहि भदौ १२ गते वाइसीयलको पहिलो राष्ट्रिय सम्मेलनको उद्घाटन गर्ने क्रममा अध्यक्ष प्रचण्डले एमाले वा कांग्रेस जस्तै बन्ने हो भने माओवादी पार्टी एमालेमा मिसिदा हुने तर्क गरेका थिए। मञ्चमासँगै बसिरहेका केही नेताहरुले प्रचण्डको उक्त आवाज सुन्दा झस्किएको जस्तो देखिन्थ्यो।
त्यसपछि लगातार आफूले ५२ सालदेखि नेतृत्व गर्दै आएको पार्टीको भविष्यका बारेमा अर्थपूर्ण सन्देश राख्ने अभिव्यक्ति दिदै आइरहेका छन्। केही दिनअघि प्रज्ञाप्रष्ठिानमा आयोजित पुस्तक विमोचन कार्यक्रममा पनि प्रचण्डले आफूलाई माओसँग तुलना गर्दै एक्लो हुने डर व्यक्त गरेका थिए। त्यसपछि आज बुधबार पोष्ट बहादुर बोगटीको स्मृतिसभामा बोल्दै उही प्रकारका अभिव्यक्तिलाई निरन्तरता दिएका छन्। कहिले प्रचण्ड पार्टी विघटन गरौं भन्छन् त कहिले आफ्नाे पार्टी आगामी निर्वाचनमा पहिलो शक्ति बन्न कसैले रोक्न नसक्ने दाबी गर्छन्। यस्ता दुविधायुक्त अभिव्यक्तिले प्रचण्डमाथि अनेकन प्रश्न उठ्नु स्वभाविक छ।
के साच्चै माओवादी केन्द्र विघटन होला ?
यो प्रश्न भने गम्भीर रुपमा खडा भएको छ। तीन दशक लामो समय नेतृत्वमा रहँदै आएका प्रचण्ड आजको दिनमा आएर किन यति कायर अभिव्यक्ति दिइरहेका छन्? उनको पारिवारिक समस्या मात्रै यसको कारण हो या पार्टीभित्र उनलाई साथ दिनेहरुको असलीयतको परिणाम ? वा डाइनामिकको नाममा हतास मनस्थिति ? यावत प्रश्नहरु उठिरहेका छन्।
पारिवारिक समस्या वा पुत्रवियोगप्रति सिङ्गो देश नै संम्वेदनशील छ। तर, राजनीतिक विषय आउँदा उनको आलोचना गर्ने वा नेतृत्व परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा उठ्दा पार्टी नै विघटन गर्ने धम्की दिनुले उनको मनोविज्ञान के हो ? भन्ने अर्को प्रश्न उठ्छ। पार्टीमा उनको विरोध गर्नेहरुलाई किनारा लगाउने, वाइपास गर्ने, अल्पमतमा पार्ने, भूमिका नदिने जस्ता आरोप सतहमै आएको कुरा लुकाउन मिल्दैन।
अनि अर्को कुरा के प्रचण्डको एक्लो प्रयासले मात्रै माओवादी केन्द्र बनेको हो ? १० वर्षे जनयुद्धका क्रममा हजारौं शहिद भएको कुरा भुल्न मिल्छ? ठूलो संघर्ष र बलिदानबाट स्थापित पार्टीकाे जीवनमाथि अर्थ राख्ने घुर्की लगाउन पाइन्छ? कि नेतृत्व हस्तान्तरण गर्न प्रचण्डलाई धौ परेको हो ? वा माओवादी केन्द्रमा पार्टीको नेतृत्व गर्नसक्ने नेता नै छैनन्? यस्ता धेरै प्रश्नहरु उठिरहेको बेलामा हामीले त्रिविमा कार्यरत राजनीतिशास्त्रका उप-प्राध्यापक मिलन श्रेष्ठलाई सम्पर्क गरेर प्रचण्डका पछिल्ला अभिव्यक्तिका बारेमा सोधेका थियौं।
उप-प्राध्यापक श्रेष्ठको भनाई जस्ताको त्यस्तै:
प्रचण्डले पार्टीलाई नै विघटन गर्नेसम्मका अभिव्यक्ति दिनुमा दुई तिन कारण छन्। पहिलो कारण पार्टीका कार्यकर्ताहरु प्रचण्डसँग पद, लाभ, सहयोग, स्वार्थ लिने मात्रै भए। उनीहरुले पार्टीलाई परेको बेला प्रभावकारी भूमिका खेल्न नसकेको र भूमिका पूरा नगरेको अवस्थामा यसरी पार्टी चल्दैन, विघटन गरौं, भनेर घुर्की लगाएका हुन्। दोस्रो कारण प्रचण्ड प्राटिकल्ली रुपमा माइनस हुँदै गएका छन्। आर्टिफिसियल रुपमा बलियो छु भन्ने सन्देश बाहिर दिदै आएका मात्रै हुन्। अर्को कुरा पार्टीको नेतृत्वमा रहेर आजका दिनसम्म सबैभन्दा बढि कार्यकर्ताको संरक्षण गरेको, मन्त्री बनाएको, पदमा पुर्याएको कार्यकर्ता बचाएर राखेको नेता नै प्रचण्ड हो।